Chii Chishuwo | e-commerce nhau
Chii chinonzi Wish
Kana iwe uchishuvira kutenga online uye kutenga zvakachipa, saka zvinogoneka kuti iwe unoziva Aliexpress. Nekudaro, haisiriyo yega "Chinese" chitoro kwaunogona kuwana mabheji makuru. Unoziva here kuti Wish chii?
Aliexpress maitiro, Wish ipuratifomu yekutenga yakaderera kwaunogona kuwana zvakada kufanana zvigadzirwa sezvinonyanya kuzivikanwa, asi dzimwe nguva nekukurumidza kuendesa uye / kana inodhura mitengo. Wakamborishandisa here? Wave kusangana naye manje? Tinotaura newe nezvazvo.
1 Chii chinonzi Wish
2 Mashandiro anoita Wish
3 Zvakanakira nekuipira kutenga
3.1 Chinhu chakanaka chekutenga paWish
3.2 Kuipa kwekutenga
4 Wish kana Aliexpress, chii chiri nani?
Ngatitange nekuziva chaizvo kuti Wish chii. Iyo ikambani yeAmerican eCommerce. Was yakatangwa naPeter Szulczewski naDanny Zhang (pamwe havaite sevakajaira kwauri asi chokwadi ndechekuti vanga vari vanogadzira paGoogle neYahoo).
Zvakafanana nechitoro chepamhepo chakafanana neAmazon, Aliexpress (kunyanya seyekupedzisira) kana Joom, chikuva chekutengesa uko vatengesi vanosangana nevatengi uye vane mitengo yakachipa kune zvingangoita zvese zvigadzirwa. Zviripachena, unogona kuwana mitengo yakawanda, asi kazhinji haina kudhura zvakanyanya.
Zvinoenderana nedata ratakawana, ine vanopfuura mamirioni makumi mapfumbamwe vanoshandisa, uye vatengesi vanopfuura miriyoni, ine catalogue inopfuura 300 miriyoni zvigadzirwa. Chinangwa ndechekukwanisa kuvapa nemitengo yakachipa pasina kudzikisira kunaka kwavo.
Iine zvese peji rekuona pakombuta uye application. Nekudaro, pane dambudziko kune yekutanga, uye ndiko kuti, kuti utarise uye uone zvavanotengesa, unofanirwa kunyoresa kutanga. Zvimwechete zvinoitika nekushandisa, vanokumanikidza kunyoreswa kuti ugone kuona zvigadzirwa zvavanazvo.
Mashandiro anoita Wish
Paunongopinda Wish, ine zita rako rekushandisa uye password, iwe unowana webhusaiti kana app ine yakapusa dhizaini uye mune chena nebhuruu, yakanyatso kuzorora uye kunyange intuitive.
Taisa chikumbiro chako uye, kana tangoita, Vanotipa 50% bhonasi. Asi kuti uiwane iwe unofanirwa kupinda muapp kwemazuva manomwe (iwe une muganho unosvika mwedzi mumwe kupinda kanomwe).
Nhanho inotevera ndeyekupinda iyo yakakurumbira tebhu, kwavanokuratidza zvigadzirwa zviri kutengwa zvakanyanya, kungave pazuva iro kana mumazuva apfuura (kunyangwe ivo vanogona zvakare kutsigirwa zvigadzirwa).
Iwe une yekumusoro menyu mune yakakura yekutsvaga injini uye yekudonha-pasi menyu maunogona kunatsa kutsvaga.
Uye zvikamu? Iwe unazvo mune yakaderera menyu, mune yechipiri bhatani (mushure meimba), pakati payo iwe uchawana fashoni yevarume, madhirezi, zvishongedzo, shangu, zvigadzirwa zvemagetsi uye zvinenge zvese zvaungafungidzira.
Mune iyo menyu imwechete une ngoro yekutengera uye imwe yekudonha-pasi menyu kwaunogona kubata account yako.
Paunodzvanya pachigadzirwa, chaunotanga kuona mafoto. Munenge mune zvese zvigadzirwa iwe unowana akawanda emhando yakanaka mafoto. Kana iwe ukadonhedza pasi zvishoma ivo vanokuratidza kutumira kwechigadzirwa ichocho kana iwe uchida kuchitenga. Pazasi iwe une chimiro chechinhu uye tsananguro. Iyi yekupedzisira ndiyo iyo mutengesi anogona kuwedzera zvakanyanya uye kutsanangura zvauri kutenga.
Iwe une bhatani rekutenga pamagumo kurudyi, bhatani dzvuku nemutengo wauchabhadhara (asi chenjera, iwe unofanirwa kuwedzera mari yekutumira kune iyo kunze kwekunge kutumira kwakasununguka).
Kana wapedza kubhurawuza muchitoro unofanira Dzvanya pangoro uye nzira yekutenga ichatanga.. Izvo zvinokurumidza kuita kubva kunze kwekunge kekutanga, kana iwe uchinge uchitaura kuti uchabhadhara sei, uye nekutsveta bhatani kubhadhara otomatiki kuchaitwa (kunze kwekunge wadzima, hongu).
Ichakuudza kuti yakawanda sei mari yekutumira, kukwanisa kusarudza kuendesa kumba (iyo inodhura zvakanyanya) kana kuunganidzwa kwechitoro. Usati waita izvi, asi chokwadi ndechekuti iri kupinda muSpain nechisimba uye ikozvino mumaguta ese nemataundi uchave nechitoro chiri padyo kwaunogona kutumira pasuru yako.
Zvakanakira nekuipira kutenga
Hapana mubvunzo kuti Kushuvira kunonakidza kutenga zvigadzirwa nemitengo yakachipa (izvo zvakafanana zvaungawana paAliexpress kana kunyange Amazon) ine nguva pfupi yekutumira.
Asi chii chakanaka uye chakaipa pazviri? Tinokuudzai.
Chinhu chakanaka chekutenga paWish
Wish mabhenefiti ariko akawanda. Tinogona kuvapfupisa mune zvinotevera:
Yakachipa zvakanyanya. Iwe unogona kuwana zvinhu zvakawanda nemitengo inosekesa. Uye zvimwe zvinokwanisika kuchengetedza chimwe chinhu uye uve nezvawaida.
Inokurumidza mukutakura. Zvigadzirwa zvinowanzounzwa nekukurumidza kupfuura izvo zvataurwa pane peji kana iyo app, kunyangwe nekutakura mumazuva mashoma. Zvechokwadi, dzimwe nguva zvinotora nguva yakareba.
Kune zvakawanda zvakasiyana-siyana zvezvigadzirwa. Chokwadi ndechokuti kune vakawanda zvokuti tingave tichitaura nezvavo kwemazuva.
Chivimbiso chepamusoro chekudzorera mari. Hauna kugutsikana nechigadzirwa? Iwe haudi? Yasvika yatyoka here? Wish inotarisira zvese uye ivo vanokurumidza kukurumidza. Kunyangwe iwe uine matambudziko nekubhadhara (kubhadhariswa kaviri kana zvakafanana) vanokuitira nekukurumidza.
Zvino, chii chakaipa nekutenga pano?
Dzimwe nguva zvinotakurwa ndezvekusingaperi. Izvi zvinodaro nekuti zvigadzirwa hazvisi mumatura ari pedyo uye kuendesa kunotora nguva yakareba. Asi zvakafanana neAliexpress.
Mamwe mashoko asina kunaka. Iwe unogona kuona izvi muapp, paunenge uchizoiisa pane yako mbozha. Isu tinofungidzira kuti iyo lottery, nekuti zvinoenderana nerudzi rwemutengesi wau "unoita bhizinesi" naye.
Wish kana Aliexpress, chii chiri nani?
Wish uye Aliexpress zvakafanana. Kunyangwe kuwedzera Joom kune matatu sarudzo dzekutenga online (Chinese) inokwanisika kune chero homwe. Takaona zvakanakira uye chokwadi ndechekuti ese ari matatu anowanzo tengesa zvakafanana. Pane dzimwe nguva pazvisiri nyore kuwana zvigadzirwa, kana kuti zvinenge zvisipo.
Ndeipi yatinokurudzira? Chokwadi ndechekuti vose vari vatatu vanoshanda zvakanaka kwazvo. Takaedza ese uye pamwe iyo inoita kuti timirire zvakanyanya ndeye Aliexpress. Kunyangwe iwe unogona kuzvitora sechishamiso nekuti kana yasvika isu hatitomboyeuke zvatakatenga.
Payero yemutengo, ichokwadi kuti Wish dzimwe nguva yakachipa kupfuura Aliexpress, asi iwe unofanirwa kutarisa mari yekutumira yaunofanira kubhadhara.
Sarudzo yatove kwauri. Iwe unoziva kuti Wish chii, mashandisirwo ayo, uye zvakanakira nekuipira. Ko iwe ukazviedza uye wosarudza kana iri sevhisi iri nani pane Aliexpress? Hazvikuvadzi kuva nezvimwe zvingasarudzwa zvekutenga zvinhu zvakachipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kutengesa nhare » Chii chinonzi Wish
Chii chinonzi Twitch
Email zvishandiso zvishandiso